समाजवादी–राजपाबीच एकताबारे छलफल नै हुन सकेन | रिपोर्टर्स नेपाल रिपोर्टर्स नेपाल
समाजवादी–राजपाबीच एकताबारे छलफल नै हुन सकेन
साउन २९, काठमाण्डौ । समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) बीच एकीकरण गर्ने भनिएको धेरै समय भयो । तर अहिलेसम्म नेताहरुले औपचारिक रुपमा छलफल अगाडि बढाउन सकेका छैनन् । समाजवादी सरकारमा छ भने राजपाले सरकारको चर्को आलोचना गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा दुई दलबीचको एकता जटिल देखिन्छ ।
समाजवादी र राजपाका शीर्ष नेताबीच अनौपचारिक छलफल जारी छ । तर औपचारिक रुपमा भने दुइपक्षले नै वार्ता गरेका छैनन् । एकतापछिको नेतृत्व, निर्वाचन प्रणाली, सरकारमा रहने वा नरहने लगायतका विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।
एकीकरणपश्चात् शीर्ष नेता व्यवस्थापन कसरी गर्ने, संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली कि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक कि मिश्रित भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।
दुई पार्टी एकीकरण गर्न सहमत भएपनि अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा वार्ता हुन नसकेकोले पनि केही अलमल देखिएको राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजकिशोर यादवको भनाई छ ।
अर्कोतिर सरकारमा सहभागी समाजवादी पार्टीले ‘एकीकरणअघि सरकार छोड्ने कि एकीकरण पश्चात् ? भन्ने पनि अर्को बहसको विषय बनेको छ । तर समाजवादी पार्टीले भने पार्टीको शैदान्तिक विषयदेखि नेतृत्वसम्म सवै विषयमा सहमती भए सरकार छाड्ने कुरा कुनै ठुलो कुरा नभएको समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष नवराज सुवेदी बताउँछन् ।
अनौपचारिक रुपमा भएका छलफलहरुमा भने राजपा अध्यक्षमण्डलमा रहेका ६ नेतामध्ये ठाकुर र महतो तथा समाजवादी अध्यक्षद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवसहितको चार सदस्यीय अध्यक्षमण्डल बनाउनुपर्नेमा भने शीर्ष नेताहरु सहमत देखिएका छन ।
पार्टीको नाम ‘राष्ट्रिय समाजवादी पार्टी’, झन्डा समाजवादीको र चुनाव चिह्न राजपाको राख्ने विषयमा अनौपचारिक सहमति समेत भइसकेको बताइएको थियो । गत २३ वैशाखमा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र नयाँ शक्ति पार्टीबीच एकीकरण भएको थियो । वैकल्पिक शक्ति निर्माणका लागि समाजवादी र राजपा नेपाल एकीकरण गर्ने विषयमा दुवै दल सहमत भएपनि औपचारिक रुपमा भने एकीकरण हुनसकेको छैन ।
काठमाडौं, मंसिर २८ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह एक हप्ता बसाईको लागि पूर्व क्षेत्र जाने भएका
स्थानीय जनताको समस्या बुझ्दै जनप्रतिनिधि
मंसिर २७, काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नंं ४ को आयोजनामा प्रदेश सांसद नारायण सिलवाल
काठमाण्डौमा गाडी पार्किङको समस्या विकराल बन्दै
काठमाण्डौ । देशकै राजधानी रहेको काठमाडौँको मुख्य समस्या सवारीसाधन पार्किङ बनेको छ । झन्डै १
सागमा पदक विजेता खेलाडीहरुलाई नगर परिक्रमा गराईयो (फोटोफिचर)
काठमाडौं, २७ मंसिर । १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग) मा पदक विजेता खेलाडीको
सिद्धबाबामाथिको अनुशन्धान अन्तिम चरणमा, तीन दिन हिरासतमा राखिने
काठमाडौं, २७ मंसिर । प्रहरी प्रशासनले बलात्कारको आरोपमा पक्राउ परेका सिद्धबाबाको नामबाट परिचित कृष्णबहादुर गिरीमाथिको
प्रचण्डले तयार पारे प्रतिवेदन, माधव नेपालसँग लगातार छलफल
काठमाडौं, २७ मंसिर । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीको
म देउवाको चाकडी गरेर आएको व्यक्ति होईन : महत (भिडियोसहित)
काठमाडौं, २६ मंसिर । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आफू सभापति